Iimbali ze-Crazy Crayons ze-Behidn
Umlando weCrayola Crayon
U-Edward Binney noHarold Smith baqulunqa amakrayrayoni eCrayola.
Iikhrayoni zentengiso ye-Crayola ziyikhrayoni zezingane zokuqala ezenziwe, zenziwe ngabazala, uEdwin Binney kunye noCharold Smith. Ibhokisi yokuqala yebhanki yeekhrayoni ezisibhozo ze-Crayola zenza i-start-start ngo-1903. Iikhrayoni zathengiswa nge-nickel kwaye imibala yayimnyama, emdaka, eluhlaza okomvu, obomvu, obomvu, oluhlaza, oluhlaza, oluhlaza. Igama elithi Crayola lenziwe nguAlice Stead Binney (umfazi kaEdwin Binney) owawathatha amagama aseFrentshi ngokuchitshi (i-craie) kunye neoli (i-oleaginous) kunye kunye nabo.
Namhlanje, ngaphaya kweenkulungwane zeefrayoni ezifakwe nguCrayola kubandakanye iikhrayoni ezi: zikhanyisa ngokukhazimula, zikhanyise ebumnyameni, zivumba njengeentyatyambo, ziguqulwe imibala, zihlambe iindonga kunye nezinye izinto kunye nezixhobo.
Ngokutsho kukaChyola "Imbali yeekrayoni"
IYurophu yayiyiindawo zokuzalwa zekrayoni "zanamhlanje", i-cylinder eyenziwe ngumntu efana nezikhonkwane zangoku. Iikrayoni zokuqala zicingelwa ukuba zenziwe ngumxube we-charcoal kunye neoli. Kamva, iingubo eziluhlaza zemibala eyahlukahlukeneyo zatshintsha indawo yamathala. Kwaye kwafumanisa ukuba ukufaka endaweni yex yeoli kwimixube eyenza ukuba izitshixo ezigqithisileyo zize zenzeke lula kwaye zenzeke lula.
Ukuzalwa kweCrayla Crayons
Ngo-1864, uJoseph W. Binney wasungula i-Peekskill Chemical Inkampani ePeekskill, NY Le nkampani yayinoxanduva lwemikhiqizo ebomvu nombala obomvu, njenge-lampblack, amalahle kunye nepeyinti equkethe i-oxide ebomvu yensimbi eyayisetyenziselwa ukugqoka i-barn ukucacisa indawo yaseMerika yasemaphandleni.
I-Peekskill yeKhemikhali nayo yaba negalelo ekudaleni ivili eliphucukileyo kunye nomnyama omnyama ngokufaka ubumnyama bekhabhoni obufunyenweyo ukwenzela ukwandisa ubomi obunzima bokuhamba ngomtya ngamanqanaba amane okanye amahlanu.
Ekubeni ngo-1885, unyana kaYoseph, uEdwin Binney, nomntakwabo, uC. Harold Smith, babumba ubambiswano noBinney & Smith.
Abazala bawandisa umgca weemveliso zenkampani ukufaka i-foot polish kunye neprinti yokunyathelisa . Ngomnyaka we-1900, inkampani ithenge ilitye lelitye e-Easton, i-PA, kwaye yaqala ukuvelisa iipensele zesikolo ezikolweni. Olu qalise uphando lukaBinney noSmith kwizinto ezingabonakaliyo kunye nemibala emibala yezobantwana. Baye baqulunqa ikrayrayoni entsha ye-wax esetyenziselwa ukuphawula iikhetshana kunye nemibhobho, nangona kunjalo, ilayishwe nge-carbon black kwaye inetyhefu kubantwana. Beyathemba ukuba i-pigment kunye neendlela zokudibanisa i-wax eziye zaphuhliswa zinokulungiswa kwiindidi ezikhuselekileyo.
Ngomnyaka we-1903, i-brand entsha yamakhrayoni eneempawu ezisemgangathweni zokusebenza zaziswa - iCrayla Crayons.
Imbali yePolurethane - Otto Bayer
Imbali yeePompyutha zekhompyutha: Ukususela kwi-Floppy Disk ukuya kumaCD
Imbali ye-European Union
I-Dyuktai Emgodini kunye neNgqungquthela - Abaqulunqi baseSiberia baseMelika?
Imfazwe YaseMelika: Omkhulu Jikelele uGeorge Sykes
Zininzi iindlela ezahlukahlukeneyo zokuthi 'Hayi' ngesiJamani
Ukubuyela kwiKholeji njengeRhafu
I-ICE yile nkcazelo yenkcazelo yakho kwi-akhawunti yakho
Kutheni iiklasi zee-Ethnic Studies ziphucula ukusebenza kwabafundi abasemngciphekweni
I Mercury square Square
I-Massacre kuMthendeleko we-Toxcatl